अपराधीलाई पूजा गर्ने भेनेजुयलाको अनौठो परम्परा « News24 : Premium News Channel
अपराधीलाई पूजा गर्ने भेनेजुयलाको अनौठो परम्परा
अपराधीको पनि पूजा ! सुन्दा अचम्म लाग्छ । तर, ल्याटिन अमेरिकी देश भेनेजुयलामा अपराधिलाई पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ । पत्यानुभएन, यो हेन्र्नुहोस ।
ह्युगो चाभेजको नेतृत्वमा कुनै समयमा अमेरिकालाई चुनौती दिएको यो देश पछिल्लो समयमा थिलथिलो बन्दैछ । आर्थिक संकट मात्र होइन, अराजकता पनि मौलाएको छ ।
भेनेजुयलामा एउटा यस्तो परम्परा पनि छ, जहाँ अराजकता र अपराधमा सक्रियलाई पूजा गर्ने गरिन्छ । यो देशका मानिसले अपराधीलाई ईश्वर मानेर पूजा गर्दछन् । कुनै समयका कुख्यात तथा मरिसकेका अपराधीहरुलाई ईश्वर मानेर पूजा गर्ने एउटा अनौठो चलन भेनेजुयलामा रहेको छ । स्पेनिश भाषामा अपराधी देवताहरुलाई सान्टोस मेलेन्ड्रोस भनिन्छ ।
कुनै जमानाका कुख्यात अपराधीको पुत्ला बनाएर एकै ठाउँ राख्ने गरेको पाइन्छ, भेनेजुयलामा । त्यस्ता अपराधी देउताका पुत्ला हेर्ने मानिसहरुको भीड नै हुन्छ । त्यस्ता अपराधका देवतामध्ये एउटा चर्चित नाम हो, लुई सान्चेज । ऊ आफ्नो समयको कुख्यात अपराधी थियो ।
अहिले उसको पुत्ला बनाएर पूजा गरिन्छ । आखिर भेनेजुयलामा ती अपराधीको पूजा किन हुन्छ ? वास्तवमा त्यस जमानामा ती अभियुक्त त्यहाँको गरीब समाजको लागि ईश्वर जस्तै थिए । अमेरिकाबाट लुटेर ल्याएको धन उनीहरुले गरीबलाई बाँड्थे । सान्चेल कुख्यात लुटेरा हो ।
उसले कसैको हत्या गरेन तर अमेरिकामा ठूलो लुट मच्यायो र त्यसलाई गरीबसँग बाँड्यो । यस्ता अपराधी देवतालाई विभिन्न खाले उपहार चढाउँछन् मानिसहरु । त्यसरी चढाइने उपहार मध्ये रक्सी प्रमुख हो । अपराधी देवतालाई रक्सी चढाएर मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ ।